ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ယောက်
စကြ်ာဝဠာသက်သေယူပြီး နေရပ်- ဧကန်ဖြစ်ရပ်များ :
rfaကို နားထောင်သူ ကြိုက်နှစ်သက်သူသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ များပါသည် ကျွန်တော်ဆိုလျင် Radio ခေတ်ကတည်းက နားထောင်သည် အမြဲမဟုတ် ယခုလည်း radioဖြင့် နားထောင်သူများ မြန်မာပြည် အနှံ့ရှိကြလေမည် များသောအားဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေ သိပ်နားမထောင်ကြ ၄၀ ဝင်းကျင်တွေနားထောင်များသည် ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ လူငယ်တွေက Action ဇတ်ကြမ်းတွေ အကြည့်များသည် သတင်း စိတ်မဝင်စား ဘောလုံးပွဲဆိုလျင် ညတစ်နာရီဖြစ်ဖြစ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ဟင် ဟာ ဂိုး ဆိုပြီး မီတာ ၃၀၀ကျော်လောက်က ကြားရသည့် အသံဖြင့် အော်ကြသည် အနားက အိမ်မှာ ကလေးရှိလျင် နားမရင်သေးက ထငိုတတ်သည် နယ်မြေကတော့ ကြံ့ဖွတ်နယ်မြေတွေမှာ အများဆုံးတွေရခဲ့၏ ပြည်သူတွေ ဘာနားလည်သလဲမေး ရပ်ကွက်တွေမှာ ဘွဲ့ရတွေတောင် တစ်ငါနားနီး တငါ ဖြစ်ကုန်ကြ၏ မိုးမလုံသောခေါင်၏ ကွင်းဆက်က အတော်ကို ဆိုးပါသည် ဦးတင်ဦးအသံဖိုင်မှာ နားထောင်တော့ ပဠာန်း အသံချဲ့စက်နဲ့ ကျယ်လောင်စွာ ရွတ်ဖတ်ကြသည်ဆိုတာ အိုးစီဘုန်ပေါင်းတည်းကြသည်ဆိုတာ စစ်အစိုး၏ ခေါင်းကြီး အယုတ်တမာ အမွေစိုး အရူးကွက်တွေဖြစ်၏ စည်းကမ်းပျက်သော အုပ်ချုပ်ရေးတွေပါ သူတို့ဖွင့်လျင် ညကြီး အချိန်မရှိ ဘယ်သူမှမပြော ကျွန်တော်စက်ပြင်တော့ နေ့ခင်းတောင် အသံ တိုးပေးပါဆိုသည် အသံချဲ့စက် ပြင်လျင် ကျယ်ကျယ်ဖွင့်စမ်းမှတော်ရုံရှိသည် ယနေ့တိုင်ခေါင်းမာလျက်ရှိသော ရန်ကုန် မဂ်လာဒုံ ဧရိယာမှာ ဖြစ်သည်
poe zaw နေရပ်- saint paul MN 55130 :
I listened to RFA long time ago I like, maybe 25 years ago. now I am working and go to school but only ELL lever 4. I cannot write very well. After school I watch RFA all the time about news in Burma. I want to talk about Burma. Than Shwe is not people.
Jul 29, 2014 09:47 AM
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အသံဖိုင် ၂၀၃ ၂၀၄ ပျောက်နေပါသည်။ပြန်တင်ပေးပါရန် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Apr 11, 2014 09:06 PM
ဇော်လင်း နေရပ်- တောင်သံးလုံးK3 :
ဘုရားတောင်မှ အမှားပြုမိသေးတယ် ။ ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ တစ်ခါမှမမှားကြသလိုဘဲ ဖတ်နေရကြားနေရတယ် လူသားတစ်ယောက်ရဲ့သမိုင်းဟာ အမှားမပါဘဲနဲ့တော့ မမှန်နိုင်ပါဘူး။
Oct 23, 2013 09:39 PM
Natttharr နေရပ်- NY, USA :
This series should be made intoabook and sold or made available.
Aug 12, 2013 06:02 PM
Air Force 88 :
I don't listen RFA, but one of my friend told me that U Tin Oo's talking about trade center building in 88. If U Tin Oo was Chief of Staff, why he didn't know about Air Force uniform? Why he lie or cover what really happen in Trader Center building? If he is senility, he might be not recognize.
Jun 23, 2013 07:30 AM
Sai Lin kan နေရပ်- Melbourne :
RFA ပရိသတ်တဦး :
၁၉၈၈ တုန်းက ကုန်သွယ်ရေးရုံးမှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကို RFA က ဥိးတင်ဦးနဲ့ တွေ့ဆိုမေးမြန်းခန်းမှာ-
>>>> ဦးထုတ်အ၀ါတွေ ကာကီအင်္ကျီနဲ့ လူတအုပ်ရောက်လာတယ်- သေသေသပ်သပ်ဘဲ ဆိပ်ကမ်းဘက်ကလားမသိဘူးတဲ့- ဗိုလ်တင်ဦးက စစ်ဦးစီးချုပ် လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ကြည်း-ရေ-လေ ယူနီဖေါင်းကိုတောင် မသိဘူးဆိုတော့- သမိုင်းကို လိမ်ချင်တာလား- အမှန်တရားကို ဖုန်းဖိချင်တာလားတော့မသိဘူးဗျ-
Jun 21, 2013 06:50 PM
Win နေရပ်- UK :
Thanks foravery informative program which I have just listened to at RFA website forafew months. Noticed that some parts are missing. Would it be possible to make the whole talks available online or in PDF format?
It's good to know about part of political and military aspects of Burmese history through the experience ofaGeneral. It has lots of lessons the new general should learn. And it has revealed the the character of sincerity
Sep 11, 2012 09:57 PM
ko myo chit နေရပ်- Dakka :
pdf file များ ရလျင် မေးထဲပို့ပေးစေချင်ပါတယ်
Sep 11, 2012 11:18 AM
PDF file လေးနဲ့များရနိုင်မလား ခင်ဗျာ
Jun 25, 2012 07:59 PM
May 10, 2012 07:49 PM
အပိုင်း october 3nd 2011 u tin oo အပိုင်းများကို ပြန်လည်နားဆင်လိုပါသဖြင့် မည်သို့ ပြန်လည်နားဆင်နိုင်မည်ကို သိရှိလိုပါသည်။
Oct 21, 2011 09:59 AM
အပိုင်း(၄၇) နဲ့ တကွ အခြားသော အပိုင်းများကို ပြန်လည်နားဆင်လိုပါသဖြင့် မည်သို့ ပြန်လည်နားဆင်နိုင်မည်သိရှိလိုပါသည်။
Oct 21, 2011 09:57 AM
ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ယောက်အကြောင်း ထုပ်လွှင့်ပြီးသမျှကို အစအဆုံး လိုချင်တယ်ဗျာ...ဒါတွေက တကယ့် သမိုင်းပါ....
Sep 18, 2011 12:58 PM
အပိုင်း(၄၇) နဲ့ တကွ အခြားသော အပိုင်းများကို ပြန်လည်နားဆင်လိုပါသဖြင့် မည်သို့ ပြန်လည်နားဆင်နိုင်မည်ကို သိရှိလိုပါသည်။